Xisbiga Dimuquraaddiga oo Hillary Clinton xalay u caleemasaaray musharaxa madaxweynaha Mareykanka+Sawirro – Radio Muqdisho
Xisbiga Dimuquraaddiga oo Hillary Clinton xalay u caleemasaaray musharaxa madaxweynaha Mareykanka+Sawirro
Xisbiga Dimuqraaddiga ayaa si rasmi ah xalay u caleemo saaray in xog-hayihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ay u noqoto musharaxa madaxtinnimo ee xisbigaasi u matali doona doorashada madaxweyne ee sanadkan ka dhici doonta Mareykanka.
Bernie Sanders oo la tartamayay Hillary Clinton ayaa ka sheegay shirka in uu jeclaan lahaa in nidaamka la marayo marka la magacaabayo musharaxa la joojiyo oo si toos ah Hillary loo magacaabo.
Seygeeda Bill Clinton, ayaa sidoo kale madasha ka hadlay, isagoo sheegay sababaha in Hillary bisha November ee soo socota loogu codeeyo inay noqoto madaxweynaha Mareykanka.
Hillary Clinton, ayaa noqotay haweeneydii ugu horeysay ee musharax u noqota mid ka mid ah xisbiyada waaweyn ee taariikhda Mareykanka.
Ciidanka NISA oo xalay qabtay gaari lagu soo xiray walxaha qarxa+Sawirro
Maleeshiyaadka Shabaab oo sheegay in Saalax Badbaado uu fuliyay qaraxyadi shalay ka dhacay Muqdisho